पाइल्स भएर तनाबमा हुनुहुन्छ ? उसो भए खानुहोस तिते करेला, यस्ता छन फाइदै फाइदा – Online Sunapati
मुख्य पृष्ठ /Health/पाइल्स भएर तनाबमा हुनुहुन्छ ? उसो भए खानुहोस तिते करेला, यस्ता छन फाइदै फाइदा
काठमाडौ असार १८ तीते करेला स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिनछ । यसको सेवन प्राय मानिसहरुको घर घरमा हुने गर्दछ । यो एउटा लहरे तरकारी पनि हो यो धेरै जसो गाँउ घरमा पाइने गर्दछ ।